अपराध Archives - Page2of4- khabarbox.com.npkhabarbox.com.np
Posts Categorized: अपराध
Posted On November 15, 2017 Author siteadmin Category अपराध, रोज्गार.
काठमाडौं—वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेले मेनपावर सञ्चालकसँग पैसा बार्गेनिङ गरेको फोन टेपमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अायोगले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। एसआरएस ओभरसिजकी सञ्चालकसँग घुस मागेको प्रकरणमा पाण्डे बुधबार चावहिलस्थित घरबाटै पक्राउ परेका हुन्। ‘सर्वोच्च अदालतले एक मेनपावरको कारोबार फुकुवा गर्न भनेको थियो। विभागले त्यसमा आनाकानी गरी अनियमितता गरेको देखियो’, अख्तियारका सहायक प्रवक्ता खगेन्द्रप्रसाद रिजालले… Read more »
बालिका बलात्कारको आरोपमा पत्रकार कोइराला पक्राउ
Posted On May 27, 2017 Author siteadmin Category अपराध.
काठमाडौं, जेठ १३ । बालिका बलात्कारको अभियोगमा नेपाली टेलिभिजन क्षेत्रका चर्चित पत्रकार केदार कोइराला पक्राउ परेका छन् । आफ्नै घरमा काम गर्न राखिएकी १५ वर्षे बालिकालाई पटकपटक बलात्कार गरेको आरोपमा महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरले उनलाई शुक्रबार साँझ पक्राउ गरिएको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी छविलाल जोशीले सुशासन न्युजलाई जानकारी दिए । पत्रकार कोइरालाले आफ्नो घरमा काम… Read more »
ललितपुरको छम्पिमा बृद्धको हत्या, कुकुरको सहयोगमा पक्राउ परे म्यादी प्रहरी
Posted On May 24, 2017 Author siteadmin Category अपराध.
ललितपुरको छम्पिमा म्यादी प्रहरीले एक जना बृद्धको हत्या गरेका छन् । छम्पि ९ का ५४ वर्षीय दीपक परियारको हत्या गरेको अभियोगमा प्रहरीले सिन्धुली घर भइ चापागाउँमा खटिएका म्यादी प्रहरी कुमार पाख्रिनलाई पक्राउ गरेको छ। मापसे सेवन गरेर बाटोमा हिँडदाँ दुइजनावीच झगडा भएको र ढुंगाले हानेर पाख्रिनले परियारको हत्या गरको ललितपुरका डिएसपी इश्वर कार्कीले बताए। परियारको… Read more »
Posted On May 19, 2017 Author siteadmin Category अपराध.
भरतपुर महानगरपालिका–२५ शुक्रनगरमा गएराति एक घरका परिवारलाई गोली प्रहार गरी घाइते बनाएर लुटपाट गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दीपक थापाले दिएको जानकारीअनुसार एकान्त ठाउँमा घर भएका ३३ वर्षीय गङ्गाराम महतोमाथि गोली प्रहार गरिएको छ भने उहाँकी आमा ५६ वर्षीया आशा साहुनी महतो, बहिनी २५ वर्षीया रामकुमारी महतोको टाउकामा धारिलो… Read more »
Posted On May 16, 2017 Author siteadmin Category अपराध, सामाजिक.
भक्तपुरमा मामाको छोरालाई खुकुरी हानी हत्या
Posted On May 7, 2017 Author siteadmin Category अपराध.
भक्तपुरमा एक युवकले मामाको छोरालाई खुकुरी हानी हत्या गरेका छन् । पारस कोइरालाले आइतबार बिहान कौशलटारमा मामाका छोरा सौरव सुवेदीको हत्या गरेका हुन् । हत्यापछि भागेका कोइरालालाई प्रहरीले धादिङको गजुरीबाट पक्राउ गरेको छ । कौशलाटारस्थित आफ्नै घरमा बसिरहेका बेला सुवेदीमाथि कोइरालाले खुकुरी हानेका हुन् । अस्पताल लैजाने क्रममा बाटैमा उनको मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरी वृत्त… Read more »
अवैध सामानले भरिएको ट्रक प्रहरी नियन्त्रणमा
Posted On May 3, 2017 Author siteadmin Category अपराध.
रौतहट– अवैध सामानले भरिएको एउटा ट्रकलाई रौतहट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। भारतबाट भन्सार छलेर ल्याएइको कपडाजन्य सामानले भरिएको ट्रक भन्ने सूचनाको आधारमा रौतहट प्रहरीले ना १ ख ८३७१ नम्बरको ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ गरिएको ट्रकलाई इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडामा राखिएको छ। ट्रकभित्र कपडा, स्पेय पार्टस, भाँडाकुँडा लगायतका सामग्री रहेको प्रहरीले जनाएको छ। ट्रकमा रहेको… Read more »
गोदावरी रूटमा माइक्रो चालक र सह–चालकले छात्राहरूलाई अपशब्द प्रयोग गर्दा प्रहरी नियन्त्रणमा
Posted On January 12, 2017 Author siteadmin Category अपराध, सामाजिक.
ललितपुरको गोदावारीबाट लगनखेल सम्म गुड्ने बा. १ ज ६०७१ नम्बरको माइक्रो बसका सहचालकले गाडीभाडामा विद्यार्थीको छुट माग्ने छात्राहरूलाई अपशब्द प्रयोग गर्दै गाली गरेपछि माइक्रो बसका चालक र सहचालक दुवै प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेका छन् । पक्राउ पर्नेमा धादिङ निवासी रबिन गुरुङ रहेका छन् भने त्यस्तै सहचालकलाई सहयोग गरेको आरोपमा चालक दीपक महर्जन पनि पक्राउ परेका छन्… Read more »